दशैँ तिहारमा नेपाल जानेले भ्याक्सिन नलगाई गए १० दिन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने - Cyprus-Nepal.com
असोज लागेसँगै विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या निकै बढेको त्रिभुवन विमानस्थल, अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
अध्यागमनमा रेकर्ड भएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला चार दिन (असोज १ देखि ४ गते) भित्रै करिब १० हजार नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
गत महिनासम्म नेपाल भित्रिनेहरुको सङ्ख्या दैनिक सरदर १४–१५ सयको हारहारीमात्र थियो ।
दैनिक चार–पाँच हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिरिइरहेका थिए । तर, दसैँ–तिहारजस्ता ठुला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै बाहिरिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको र भित्रिनेहरूको सङ्ख्या बढेको वैद्यको भनाइ छ ।
‘केही दिनअघिसम्म स्वदेश भित्रिनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो । दैनिकजसो चार–पाँच हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिरिइरहँदा मुस्किलले दिनमा १२ देखि १५ सय नेपालीहरू मात्र स्वदेश भित्रिइरहेका थिए ।
तर, पछिल्ला दिनमा यस्तो सङ्ख्या विदेशिने भन्दा फर्कने (आगमन) हुने नेपालीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो क्रम अझ बढ्नेछ,’ वैद्यले भने ।
चाडपर्वलाई नै लक्षित गर्दै नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किन थालेपछि हवाई कम्पनीहरूलाई पनि नेपाली अकुपेन्सी (यात्रुहरू) बोक्न भ्याइनभ्याई पर्न थालिसकेको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै केही अन्तरराष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूले त आफ्नो हवाई उडान समेत बढाएका छन् ।
खाडी मुलुक साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँगै मलेसिया लगायतबाट नेपालमा दैनिक उडान भर्दै आएका कतार एयरवेज, एयर दुबई, एयर थाई र टर्किस् एयरलाइन्स लगायतले आफ्नो दैनिक उडान वृद्धि गरेका हुन् ।
यात्रुहरूकै सुरक्षा र अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा व्यवस्था भने कडा पारिने उनले बताए । यात्रुहरूको पार्सल, लगेज तथा कागजपत्र छिटोभन्दा छिटो सहज र सरल तरिकाले चेकजाँच व्यवस्था मिलाइने र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाइने उनले बताए
नेपाल आउने यात्रुहरूका लागि अध्यागमन विभागले ७२ घण्टाभित्र गरेको पीसीआर रिपोर्ट र पूर्ण डोज खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिर्वाय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी जोकोही आगन्तुकले नेपाल प्रवेश गर्न ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिर्पोट र पूर्ण डोजको खोप लगाएको प्रमाण ल्याउनुपर्ने अध्यागमन सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) का संयोजक गोपालप्रसाद पाण्डेले रातोपाटीसँग बताए ।
अन्यथा आगन्तुकले १० दिनसम्म होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सुव्यवस्थाको मामलामा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन हेल्थ डेक्स कटिबद्ध छ । पूर्ण चेकजाँच विना एकजना पनि छिर्न पाउँदैनन्, सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै ध्यानमा राख्दै हामीले पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । जो नेपाल आउन चाहन्छ उसले ७२ घण्टाभित्र गरेको पीसीआर रिपोर्टका साथमा पूर्ण भ्याक्सिनेटको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ ।
अन्यथा नियमअनुसार नै हामी जो कोही आगन्तुकलाई १० दिन बस्नुपर्ने गरी होटल क्वारेन्टिमा पठाउँछौँ,’ पाण्डेले भने ।
विदेशबाट नेपाल फर्किंदै हुनुहुन्छ ?
कुन सामान ल्याउँदा कति लाग्छ भन्सार ? हेर्नुहोस्
चाडपर्वमा कामदारमाथि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको आँखा
30/12/2019 NewsRoom 2